Reporting from Zimbabwe: why the sanctions must be lifted | University of Cambridge
HomeResearchDiscussion Reporting from Zimbabwe: why the sanctions must be lifted Research Home
Reporting from Zimbabwe: why the sanctions must be lifted Research
Rowan Jones I’m sitting in a stuffy office in Bulawayo’s business district, struggling to get reliable internet access, while listening to young people’s accounts of their disheartening attempts at entrepreneurialism. On the desk in front of me is a pile of national newspapers filled with conflicting reports of the recent Zimbabwean elections. In some ways, this picture sums up how Zimbabwe comes across to the outside world: difficult to connect with, flailing economically and endlessly contradictory.
24 Aug 2013 Image
Mugabe and Tsvangari campaign posters on Bulawayo's Main Street, August 2013. Credit: Rowan Jones Share
Reporting from Zimbabwe: a visit to Harare’s biggest township Reporting from Zimbabwe: a family in Bulawayo talks about politics The life of borders: where China and Russia meet When the talking stops Campus radicalism fears too extreme? Subjects
Africa Zimbabwe Election politics economics poverty Places
Department of Social Anthropology Sign up to receive our weekly e-bulletin